Home Wararka Mooshiin ka dhanac ah Madaxweyne Ku xigeynka Galmudug oo manta laga doodayo
Mooshiin ka dhanac ah Madaxweyne Ku xigeynka Galmudug oo manta laga doodayo
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa maanta waxa ay kulan ku yeelanayaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, sida ay inoo sheegeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay lagu wargeliyay in maanta oo Axad ah uu jiro kulanka baarlamaanka, islamarkaana ajandaha kulanka uu yahay ka doodista mooshinka ka yaalla Madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Mudanayaal gaaraya 97 ayaa waxa shalay mooshin xilka qaadis ah u gudbiyeen guddoomiye ku-xigeenka Koowaad Xareed Cali Xareed, waxayna tilmaameen inuu shaqadiisa gabay Madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Previous articleDagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo duqeyn lagu dilay
Next articleMaxay tahay shuruudaha cusub ee lagu soo rogay dadka qabanaya xilalka gobolada DDSI?
Maxaa looga hadlay Kulankii dhex maray Khayre iyo Madaxweyne Erdogan?
Golaha Aqalka Sare ee Dalka oo Isku Qilafsan Arinka Shirkada DP...